Ny fizahantany any India dia mivoaka amin'ny alàlan'ny sarimihetsika, fanatanjahan-tena, fivavahana, fijanonana, asa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Ny fizahantany any India dia mivoaka amin'ny alàlan'ny sarimihetsika, fanatanjahan-tena, fivavahana, fijanonana, asa
Vaovao Mafana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • Sports • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Fametrahana fizahan-tany any India
Ny minisitry ny governemanta ao amin'ny governemanta Uttarakhand, Satpal Maharaj, dia nilaza androany fa ny governemanta dia nanolotra fanampiana ara-bola sy ara-bola isan-karazany ho an'ny sehatry ny fizahan-tany ary nanao dingana maromaro hanampiana azy io.
Misy fonosana crore INR 200 namboarina ho an'ireo mpanome tolotra voakasik'io COVID io toa ny mpizahatany mpitsangatsangana sy ny mpitari-drano, sns.
Ny drafitra dia tanterahina any amin'ny distrika manerana an'i India mba hamelomana indray ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny fomba isan-karazany toy ny sarimihetsika sy fanatanjahantena, fivavahana ary toeram-piasana sy asa.
Ny FICCI Chair dia nilaza fa ny fitsangatsanganana, fizahan-tany ary fandraisana vahiny no voalohany nijaly ary angamba no ho sitrana farany.
Niresaka momba ny fivoriana Valedictory an'ny e-Conclave faha-2 fitsangatsanganana, fizahan-tany & fandraisam-bahiny: faharetana sy làlana mankany amin'ny fanarenana karakarain'ny FICCI, Andriamatoa Maharaj, ny minisitry ny kabinetra, ny fanaraha-maso ny tondra-drano, ny fanondrahana madinidinika, ny fanangonam-bokatra amin'ny ranonorana, ny fitantanana ny rano, ny Indo- Tetikasa momba ny renirano Nepal Uttarakhand, fizahan-tany, fivahinianana ary fampirantiana ara-pinoana, kolontsaina, nilaza fa misy ny politika isan-karazany noraisin'ny fanjakana hanampiana ny sehatra hamelomana indray.
“Ao anatin'ireo politika sy fanampiana isan-karazany noraisin'ny fanjakana dia manome tetika politika hisarihana sy hanohanana ny fanjakana ny indostrian'ny sarimihetsika mitifitra Uttarakhand. Ho fanampin'izay, nanome fanampiana ho an'ny INR 10 lakhs izahay amin'ny faritry ny havoana ary INR 7.5 lakhs amin'ny lemaka ambanin'ny Deendayal Homestay Yojana. 3,400 XNUMX ny tokantrano voatokana voasoratra anarana ao anatin'ity tetika ity, ”hoy izy.
Ankoatr'izay, miresaka momba ny fironana farany amin'ny fizahan-tany, Andriamatoa Maharaj nilaza fa ny olona koa dia manantena fatratra ny fijanonana sy ny asa. “Nandritra ny Veer Chandra Singh Garhwali Yojana, nanomboka fanoratana an-tserasera izahay. Nanamboatra boriborintany isan-karazany koa izahay hanamafisana ny dia an-toerana, ”hoy izy.
Isiraeliana izao dia mamela ny mpizaha tany Rosiana manana jabs 2 amin'ny...
Fironana mampidi-doza vaovao any Alemaina: Fanafihana antsy
Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai ary Amsterdam...
Seychelles tsy firenena ahiana ho an'i Aostralia izao...